Wararka - sidee qalabka quruxda wajiga hydra u nadiifiyaa maqaarka?
Waxaan u maleynayaa in dad badani ay yaqaanaan qalabka quruxda wajiga ee hydra, waa mid aad loo jecel yahay hadda. Qalabkan quruxda waxaa lagu magacaabi karaa boqorka nadiifinta wajiga. Laakiin dad badani ma fahmin sababta ay si fiican maqaarka ugu nadiifin karto? maanta waxaan ka hadli doonaa sidee qalabka wajiga hydra u nadiifiyaa maqaarka?
Mashiinka wajiga hydra waa aaladda xiriirka xiriirka quruxda ee ay sameyso mabda'a makaanikada dareeraha. Dhaqdhaqaaqa wareegga ah ee madaxa xayeysiinta elliptical ee sida gaarka ah loo sameeyay wuxuu buufiyaa xalka qurxinta, wuxuuna si dhakhso leh u xayeysiiyaa maqaarka dhintay dusha maqaarka iyo wasakhda daloolada. Ujeedada ugu weyn ayaa ah in la isticmaalo cadaadiska xun ee faakiyuuga ee goobooyin yaryar si buuxda loogu daro dareere xumbo iyo dareeraha nafaqada leh lakabka dusha sare ee maqaarka, oo si tartiib tartiib ah loogu nadiifiyo wasakhda lakabka dusha sare ee maqaarka. Nidaamka hawlgalka oo dhan ee goobooyin yaryar ayaa ku jira xaalad raaxo leh, iyo goobooyinka yar yar ka dib marka la dhammeeyo waxay maqaarka u muuqdaan kuwo tarjumaya oo dhalaalaya.
1. Kahor isticmaalka qalabka, waxaad u baahan tahay inaad iska saarto qurxinta oo aad nadiifiso wejigaaga. Wejiga inta badan la isku qurxiyo ayaa u nugul inuu uruuro walxaha waxyeelada leh ee ay ka tagtay is qurxinta. Nadiifinta xumbo yar ayaa sidoo kale ah in laga saaro walxahaan waxyeelada leh. Marka tani waa tallaabo ay tahay in la sameeyo.
2. Ka dib markaan soo saarnay qurxinta iyo nadiifinta maqaarka, waxaan u baahanahay inaan isticmaalno nuxurka jilicsanaanta geeska, ku dul dhigno cudbi sanka sanka, isla markaana ku daadinno nuxurka jilicsanaanta geeska sanka. Waqtigaan, waxaan ka tagi karnaa sanka la'aanteed nuxurka si buuxda u jilcinno keratin.
3. Marka xigta, bilow qalabka, hagaaji qaabka nadiifka ah oo daar baaritaanka hada socda. Laga soo bilaabo sanka illaa aagga midabbada leh ee bushimaha ku wareegsan, wuxuu bilaabaa inuu dhuuqo, ka dibna si tartiib ah ayuu ugu sii fidaa aagga T-qaabeeya ka dibna dhabanka oo dhan, iyo sidoo kale dusha wejiga.
4. Ka dib markii si qoto dheer loo nadiifiyo qashinka maqaarka, marka maqaarku si dhakhso leh oo wanaagsan u nuugo karo nuxurka, soo bandhigo xalka nafaqada, dhaqaajinayo habka hordhaca ee yar-yar si kor loogu qaado nuugista, loona gaaro lakabka maqaarka si loo gaaro isugeynta ugu fiican ee goobooyin yaryar iyo xalka nafaqada.
5. Kadib soo bandhigida xalka nafaqada kadib, ku hagaaji aaladda micro micro mode si loo bartilmaameedsado lymfatiga, garka iyo qeybaha kale ee wajiga, taasoo si wax ku ool ah uga caawin karta wajiga inuu yareeyo bararka oo uu yeesho saameynta qaadista iyo adkeynta . Qaadista qoorta, oo ay fududahay in la iska iloobo si loo ilaaliyo nolol maalmeedka, waxay ka dhigi doontaa maqaarkaaga mid qurux badan oo adag.